March 18, 2020 - MM Live News
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော် ဘုရားပွဲတော်ကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းမယ် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အထင်ကရ စေတီတော်တစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင်စေတီတော် ပွဲတော် အစီအစဉ်အားလုံးကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သန်းဝင်းက ဘီဘီစီကို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ ‘‘ တောင်တက်ကားတွေရော အဆင်းအတက်အားလုံး မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်ဘုရားပွဲတော်အစီအစဉ်ထက် တစ်လခွဲလောက်စောပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေရော ဒါတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခြေလျင်တက်ပြီး ဖူးမြော်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ သွားလို့ရပါတယ်’’လို့ သူကပြောပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော်ကိုသွားရောက် ဖူးမြော်သူ များပြားလွန်းတာကြောင့် ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ သွေဖီနေတဲ့အတွက် ယာယီဆိုင်းငံ့ ထားဖို့ အကြောင်းကြားစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ အစိုးရအဖွဲ့ကို မတ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် […]
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်းကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေးရွတ်ကြည့်ပါလား တစ်နေ့ ( ၇ ) ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ထူးခြားပါလိမ့်မယ်
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်းကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေးရွတ်ကြည့်ပါလား တစ်နေ့ ( ၇ ) ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ထူးခြားပါလိမ့်မယ် လွယ်ကူထိရောက် အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေးကို ရွတ်ကြည့်လိုက်ပါ….. တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားအစွမ်း ထက်မြတ်သော သိကြားမင်း ဂါထာတော် ” ဝေဒါသာကု၊ ကုသာဒါဝေ ဒါယသာတ၊ တသာယဒါ၊ သာသာဓိကု၊ ကုဓိသာသာ ကုတကုဘု၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည်၊ ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့၊ သာ = လျင်စွာ၊ ကု = ပြေးကုန်သတည်း။ ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည်၊ သာ = မိမိအလိုလို၊ ဒါ = […]
“မင်းက တောတွင်းရထားလမ်းနေရာကို ရောက်နေတယ်။မင်း ရောက်နေတဲ့ လမ်းဆုံကို ရထားနှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခုတ်မောင်းလာကြတယ်။ နောက် ၁၅ မိနစ်ကြာရင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ မင်းရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ တိုက်မိတော့မယ်။ အဲဒါဆို မင်း ဘာလုပ်မလဲ?” ” ကျွန်တော် ကုန်းမြင့်ကို တက်ပြီး အလံနီပြတားပါမယ်။” “မင်းနဲ့အတူ အလံပါမလာဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ?” ” ကျွန်တော်က လက်ကိုင်ပုဝါ အမြဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီ လက်ကိုင်ပုဝါလေးထုတ်ပြီး ဝေ့ရမ်းအချက်ပြမှာပေါ့။” “ညအချိန် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် မင်း ဘာလုပ်မလဲ?” “ဓာတ်မီးနဲ့ အချက်ပြပြီး တားမှာပေါ့ဗျ။” “ဓာတ်မီးက ဓာတ်ခဲအားကုန်နေတယ်ဆိုရင်ရော?” “မီးခြစ်တော့ အမြဲပါတယ်ဗျ။ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေ မီးဖိုပြီး အချက်ပြမယ်ဗျာ။” “မိုးသည်းသည်းမဲမဲရွာနေလို့ မီးဖိုလို့ မရဘူးကွာ။ မင်း ဘာလုပ်မလဲ?” “ကျွန်တော့်ညီလေး ဂျိုးဇက်ကို […]
နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ လူမမာတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ… ( ၁ ) စကားပြော ဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့် အချိန်မှာ နေကောင်းလား၊ သက်သာလား ဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ … ။ ( ၂ ) ရေမွှေး ဆွတ်ပြီး ငါ့အနား လာမရပ်ပါနဲ့ ! ( အမွှေးနံ့၊ ချွေးနံ့၊ ဟင်းနံ့တွေ ကိုတောင် မခံနိူင်တော့တာကိုသတိပြု မိပါစေ ) ( ၃ ) ဝတ္တရား အရ လူနာ မေးလာရင်း ဆယ်လ်ဖီ လာမဆွဲပါနှင့် ! ( ထွက်ခွာ ရတော့မယ့် ငါ့ကိုဘေးနားထားပြီး သင်ပျော်ပြ မနေပါနှင့် ၊ ငါ့ကို ချစ်ရင် အားနာပါ […]
မွနနျးနှယျဟာ ၁၉၀၆ ခုနှဈမှာ မှေးတာဖွဈပါတယျ။ယခုရှိဆိုရငျ ၁၁၁ နှဈရှိရော့ပေါ့။ ဦးသနျ့က ၁၉၀၉ ခုနှဈမှာ မှေးတာဖွဈပါတယျ။မွနနျးနှယျထကျ ဦးသနျ့က ၃ နှဈပငျငယျပါသေးတယျ။ နောကျပွီး ၁၉၁၅ မှေးတဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတို့၊စာရေးဆရာမ ဒျေါခငျမြိုးခဈြ တို့ ဟာမွနနျးနှယျအောကျ ၉ နှဈလောကျ ငယျကွပါသေးတယျ။မွနနျးနှယျမှေးတဲ့အခြိနျဟာ အင်ျဂလိပျလကျအောကျက ရုနျးထကွဖို့၊ လှတျလပျကွဖို့ လူငယျတှေ အသိအမွငျ၊မြိုးခဈြစိတျ တှေ ပေါကျဖှားရှငျသနျလာကွတဲ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ။ အခုရေးပွတဲ့ အကွောငျးဟာ အောငျဆုရှငျ (သာကီဝငျ)ဆိုတဲ့ စာအုပျထဲက မွနနျးနှယျရဲ့ အကွောငျး ဖွဈပါတယျ။စာရေးဆရာအောငျဆုရှငျ အဘဦးအောငျဆု နဲ့တှပွေီ့းမွနနျးနှယျအကွောငျး မေးမွနျးစပျစု ထားတာဖွဈပါတယျ။ မွနနျးနှယျဟာ စျောဘှားမြိုးဆကျ၊ သူမ၏ အဖအေမတှေကေ မိုးကုတျကြောကျတှငျးပိုငျတှေ၊သူမမှေးပွီးနောကျ မိဘတှမှော ကြောကျတှငျးက ကြောကျအောငျပွီး စီးပှားတှေ တရိပျရိပျတကျလာလို့ သူတို့၏ သမီး […]
လငျဗနျးတဈခပျြအဝိုငျးဖွဈရမညျ။ (မညျသညျ့လငျဗနျးမဆို ရပါသညျ။ စတီလငျဗနျး ကွေးလငျဗနျးကိုသုံးစခေငျြပါသညျ။) သရကျအရှကျ ၉ ရှကျ (အပေါကျ အပွဲ အနာအဆာ မပါစရေ။ အနာအဆာကငျးတာ ကိုသုံးပါ။ သရကျရှကျသညျ ကကျြသရတေိုးစသေညျ။ မဂျလာရှိစသေညျ။) ဆီမီးခှကျ (မွခှေကျ ကွေးခှကျ စတီးခှကျ ကွိုကျရာသုံးပါ။ ကြှနျတျောကတော့ ကွေးခှကျကို သုံးပါသညျ၊ အိန်ဒိယပစ်စညျးရောငျးသောဆိုငျမှဝယျပါသညျ။ ပုံမှာပွထားပါသညျ။) ထောပတျဆီ (ထောပတျ ဆီသညျ အတိုကျအခိုကျကငျးစသေညျ၊ ရနျကိုရှငျးစသေညျ၊ စီးပှားဥစ်စာကို အထူးပေးတတျသညျ။) မီးဇာခညျြ (မီးဇာခညျြ မရပါက ဂှမျးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ထညျ့၍လိပျပွီးသုံးပါ။ စက်ကူကိုလကျတှငျထညျ့၍ လိပျသလို လုပျခိုငျးခွငျးပါ။) အားလုံးစုံလြှငျ လငျဗနျးပျေါ သရကျရှကျတငျပါ ၊ အဖြားမြားကို ဘုရားရှငျဘကျသို့ထားပါ၊ ပွီးလြှငျ ဆီမီးခှကျတငျပါ၊ ဆီထညျ့ပါ ၊ မီးဇာထညျ့ပါ၊ မီးထှနျးပါ၊ […]
လက်ထဲမှာငွေပြတ်တာနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကြည့်ပါ
လကျထဲမှာ ငှပွေတျတာနဲ့ ကွုံတဲ့အခါ ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ လုပျကွညျ့ပါနျော … ။ ငှေ ပွတျ​သှားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ) လြူကွညျ့ပါလား လကျတှအေစှမျးမို့ပါ … ။ ကွှပေနျးကနျ​​နဲ့ဖွဈ​ဖွဈ လငျ​ဗနျး​နဲ့ဖွဈ​ဖွဈ ​ပေါငျ​မုနျ့​ ၅ ခုထညျ့​ပါ …. ။ ပေါငျ​မုနျ့​​ပျေါကို ကိတျ​မုနျ့​၂ ခုတငျ နို့ဆီ ဆမျး.ပွီး အိမျ​ကဘုရားမှာ မုနျ့ဆှမျးလှူရငျး​ ငှကေိစ်စကို ဆု​တောငျးရတာ​လေ။ ဗုဒ်ဓဟူး​နေ့ မနကျ​ ၁ဝး၃၀.မိနဈ​က​နေ ​နေ့၁၂ နာရီ မထိုးခငျ​ကွားမှာ လှူရငျ​ ပို​တောငျ​မွနျ​ ​သေးသဗြ။ ကွာသပ​တေး​နေ့ မနကျ​ ရး၃၀ မိနဈ​ မထိုးခငျ​ ထပျ​ပွီး လှူလို့ရ​သေးတယျ​။ အဲဒါ တနင်ျလာနံ အခကျ​အခဲ မြိုးစုံ အတှကျ​ အဆငျ​ […]
ဒီနေ့ အထက ( ၂ ) မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတဲ့ဗျာ ၊ သက်ကြီးပုံစံ မဟုတ်ဘဲ တကယ့် သုံးတန်း လေးတန်း အရွယ်လောက်နဲ့ဘဲ အရွယ်ရောက်မှူ့ ရပ်ဆိုင်းသွားတယ် ထင်ပါ တယ် ၊ စာတော်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ် တက် တဲ့အခါ ကမ္ဘာ့ အငယ်ဆုံး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဖြစ်လာတော့မှာပါ ။ မောင် ခေတ်မင်းသန့် လို့ အ မည် ရပါတယ် ။ unicode version ဒီနေ့ အထက ( ၂ ) မှာ တက်ကသိုလျဝငျတနျးဖွတေဲ့ ကြောငျးသားလေးတဲ့ဗြာ ၊ သကျကွီးပုံစံ မဟုတျ ဘဲ တကယျ့ […]
ပန်းများလှိုင်လှိုင်ပွင့်စေဖို့ နဲ့ ပန်းတာရှည်ခံအောင် ဒီလိုလုပ်ပါ…
ပနျးမြားပှငျ့စဖေို့ နဲ့ ပနျးတာရှညျခံအောငျ ဒီလိုလုပျပါ အပငျမသနျရငျနေ ပနျးတှပှေငျ့နရေငျကို ပြျောနပေါပွီဆိုတဲ့ ပနျးခဈြသူတို့အတှကျ ပနျးပှငျ့စတေဲ့ အားဆေးတှပွေောပွခငျြပါတယျခငျဗြ။ ပနျးဆိုပမေယျ့ ဓါတျေသဘာအရ အသီးနဲ့လညျး ဆိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလငျြးသငျ့သလို ခြဲ့ပွီး သုံးကွပါခငျဗြ။ (၁) ကွကျဥခှံ ဒါကတော့ ကြှနျတျောအမွဲပွောနကေမြို့ တျောတျောမြားမြားသိနေ လောကျပါပွီခငျဗြ။ ကွကျဥအခှံမှာက အပှငျ့အတှကျလိုအပျတဲ့ Calcium နဲ့ Phosphoric acid တို့အပွငျ Nitrogen ပါ ပါဝငျလို့ အပငျကိုလညျး အားရှိစပေါတယျ။ ကွကျဥခှံကို အမှုနျ့ကွိတျပွီးပဲဖွဈဖွဈသုံးလို့ရသလို ဆေးရညျအနနေဲ့လညျး သုံးလို့ရပါတယျခငျဗြ။ ဆေးရညျ ရယူပုံက ကွကျဥခှံ ငါးလုံးခနျ့ကို ထုခွပွေီး ရတေဈလီတာနဲ့ပွုပျပါတယျ။ ပွီးရငျ ရတေဈဂါလံနဲ့ ပွနျရောသုံးပါတယျခငျဗြ။ ဆေးရညျပိုထိရောကျစခေငျြရငျတော့ တဈညတိတိ နှပျထားပွီးမှာ နောကျရကျမှာ သုံးပေးပါ။ (၂) […]
ကိုယ့်အိမ်မှာ အသက် ၆၀ နဲ့အထက် လူကြီးတွေရှိရင် ဒါလေးသိထားပါ….
ကိုယျ့အိမျမှာ အသကျ ၆၀ နဲ့အထကျ ရှိတယျဆိုရငျ သူတို့ကို အပွငျသိတျ မထှကျခိုငျးပါနဲ့ ။ လူတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ကို တတျနိုငျသမြ ရှောငျကွဉျပါ။ UK မှာဆိုရငျ ၆၀ နဲ့အထကျတှေ မသခေငျြရငျ အခုအခြိနျကစပွီး နောကျ ၄လအထိ … အိမျထဲက အိမျအပွငျ မထှကျကွဖို့ UK ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးက တိုကျတှနျးထားပါတယျ ။ မပွေးသျော ကနျရာရှိဆိုသလို အခုခြိနျထဲက တကိုယျရေ ကာကှယျမှု လုပျထားမှသာ ကိုယျ့ထံ ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျရောကျလာနိုငျမယျ့ အခွအေနကေို ဟနျ့တားထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ အခု တကမ်ဘာလုံးမှာ V i r u s ကူးစကျခံရသူပေါငျး သောငျးခြီနပေမေယျ့သေမ ငျးက ၆၀ […]